Tiantsika mihoatra ny volamena ny didin’Andriamanitra
"Izany no itiavako ny didinao mihoatra noho ny volamena, eny, noho ny tena volamena aza" - Sal. 119:127
Amin'izao vaninandro feno loza izao, dia moa hampihena ny fanarahantsika ny fahamarinan'Andriamanitra ve isika? Ary moa hampihena ny fifikirantsika amin-kafanam-po amin'ny lalàny noho ny tamin'ny taona lasa rehetra ve isika? Miseho ankehitriny ireo toe-javatra izay nambaran'i Kristy indrindra fa hiseho mialoha ny hiaviany fanindroany amin-kery sy voninahitra. Ny faharatsiana izay manjaka ankehitriny dia mila hangeja ary hanapotika mihitsy aza ny finoana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Kanefa izao indrindra no fotoana hamiratan'ny volamenan'ny fahatokiana kristianina, raha oharina amin'ny taimboraky ny fihatsarambelatsihy sy ny faharatsiana. Izao no fotoana hanehoan'ireo nofidin'i Kristy ny fanoloran-tenany eo amin'ny fanompoana Azy. Izao no fotoana hanehoan'ireo mpanara-dia Azy ny fijoroana ho vavolombelona ambony indrindra ho an'ny Tompony amin'ny alalan'ny fijoroana ho mahatoky, eo anatrehan'ny faharatsiana izay manjaka.
Hitantsika ny vokatry ny fanaovana tsinontsinona ny lalàn'Andriamanitra, dia ny tsy fahitsiana, ny halatra, ny fanaranam-po, ny fidorohana zava-mahadomelina sy ny vonoan'olona. Koa te hilaza isika, miaraka amin'ny mpanao Salamo manao hoe: "Izany no itiavako ny didinao mihoatra noho ny volamena, eny, noho ny tena volamena aza"; "amin'ny fitandremana azy misy valiny lehibe". Ny fahoriana lehibe indrindra no hitranga rehefa ailika ny lalàn'Andriamanitra, na ho an'ny tokantrano na ho an'ny fiarahamonina. Ao amin'ny fanarahana amim-pahatokiana ny didin'i Jehôvah no hany fanantenana ho antsika mba hihatsaran'ny zava-miseho. Tany aloha dia nanandrana nanda ny fahefan'Andriamanitra i Frantsa mpihodina. Toe-javatra mampihoron-koditra no naterak'izany! Nolavin'ny olona ny lalàn'Andriamanitra ka nolazainy fa zioga manandevo. Tao amin'izay nireharehany ho fahafahany anefa no nametrahany ny tenany teo ambanin'ny fanapahan'ny mpitondra mpanjakazaka indrindra. Fifanjevoana sy rà mandriaka no nisy tamin'izany andro izany. Izany no nanaporofo teo anatrehan'izao tontolo izao fa ny fomba azo antoka indrindra handrodanana ny fototry ny filaminana sy ny fitondram-panjakana dia ny fanaovana tsinontsinona ny lalàn'Andriamanitra (...).- ST, 15 Martsa 1881 .